3 Ka Qaad-Jidka 5 Fure illaa Suuqgeynta Emailka Gaarka ah | Martech Zone
Sida laga soo xigtay Sahaminta Suuq-geynta 2012 Sherpa Benchmark, dhowr shirkadood ayay u badan tahay inay kordhiyaan miisaaniyadooda email wax ka badan 30% sannadka 2012. Si kastaba ha noqotee, Delivra waxay ogaaneysaa in shirkadaha badankood ay wali la halgamayaan isla taatikada aasaasiga ah ee emaylka - dhismaha liiska, waxyaabaha ku jira, is-dhexgalka, qaabeynta, iwm.
Ha siyaadin miisaaniyadaha emaylka adiga oo aan si cad diirada u saarin waxa u baahan in la wanaajiyo iyo waxa aan ahayn. Waqti u qaado inaad diirada saarto aasaasiga; waa fikradahan aasaasiga ah ee ka dhigaya barnaamijka suuqgeynta emaylkaaga mid gaar ah. Dhawaan, Delivra waxay daabacday isbeddellada, tirakoobka iyo talooyinka. Hoos waxaa ku qoran 3 qaadasho:
Abuur nuxur ku saleysan xogta. Abuuritaanka waxyaabaha ku habboon waxay caqabad ku noqon kartaa suuqgeeyayaasha emaylka. Si joogto ah u ururi xogta ku saabsan dhagaystayaashaada si aad uga dhigto waxyaabaha sida ugu habboon u noqon kara. Soo ogow waxa dhagaystayaashaadu rabaan inay maqlaan adoo weydiinaya sahan ama xarun doorbid.
Qeybintu waxay ku siineysaa gees gebo gebo ah tartanka. In ka Daraasad Sayniska Suuqgeynta Suuq-geynta 2012Sherpa XNUMX, waxay sheegtey in 95% shirkaduhu ubaahanyihiin hagaajinta kala goynta liiska. Yaan lagaa tegin - bilaw inaad diiradda saarto dhammaystirka qaybtaada hadda!
Naqshadeynta mobilka, muddada. Sida lagu sheegay isla warbixinta, 58% dadka ka ganacsada emayllada ayaan nashqadeynin emayllada si habboon ugu soo bandhiga taleefannada casriga ah Taleefannada casriga ah ayaa si aad ah caan u noqday, markaa maxaad u naqshadeyn lahayd emayllada iyada oo tan maanka lagu hayo?
Tags: Content SuuqDatadelivraEmail MarketingSuuqgeyntaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaqaybintaisbeddellada
Yaraanta Xogta Moobilka Soo Socota
5 Waxyaabaha Soo-jeedinta Iibka Guusha